» एकै परिवारका ९ जना घरभित्र मृत फेला, ३ पुस्ताको एकसाथ अन्त्य
एकै परिवारका ९ जना घरभित्र मृत फेला, ३ पुस्ताको एकसाथ अन्त्य
७ असार २०७९, मंगलवार १४:०५ प्रकाशित
काठमाडौं – महाराष्ट्रको सांगलीमा एकै परिवारका ९ जना घरभित्र मृत फेला परेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । घरमा ७२ वर्षीया हजुरआमादेखि १५ वर्षीय नातिनीसम्मको मृत्यु भएको छ । यसरी परिवारका तीन पुस्ताको एकसाथ अन्त्य भयो । परिवार ऋणमा डुबेको पनि अनुसन्धानमा बाहिर आएको छ ।
मुम्बईबाट साढे तीन किलोमिटर टाढा रहेको सांगली जिल्लाको म्हैसाल गाउँमा एकै परिवारका ९ जनाको मृत्युको खबर आएपछि सनसनी मच्चिएको थियो । वानमोर परिवार गाउँको डेढ किलोमिटर भित्र दुईवटा घरमा बस्थे । एउटा घरमा ६ जनाको शव भेटियो भने अर्को घरमा तीन जनाको शव भेटियो । प्रहरीले घरबाट शव निकाल्दा वरपरका मानिसहरु पनि रुन थाले ।
छिमेकीहरुले यो परिवार निकै सुखी परिवार रहेको बताएका छन् । अचानक के भयो कि उनले यति ठूलो कदम उठाए? आत्महत्या गर्नेमा पोपट यल्लाप्पा वनमोरे (५२), संगीता पोपट वनमोरे (४८), अर्चना पोपट वनमोरे (३०), शुभम पोपट वनमोरे (२८), माणिक यल्लाप्पा वनमोरे (४९), रेखा माणिक वनमोरे (४५), आदित्य माणिक वनमोरे (१५), अनिता माणिक वनमोरे (२८) और अक्काताई वनमोरे (७२) छन्.
पुलिसले पोपट र माणिक वनमोरे दाजुभाइ भएको बताएको छ । पोपट वनमोरे एक शिक्षक थिए र माणिक वनमोरे एक पशु चिकित्सक थिए। पोपट वनमोरकी छोरी बैंकमा काम गर्थिन् । प्रहरीले माणिक वनमोरे, उनकी श्रीमती, आमा, छोरी, छोरा र भतिजाको शव घरमा फेला पारेको हो । पोपट वनमोर, उनकी श्रीमती र छोरीको शव अर्को घरमा फेला परेको छ । वनमोर परिवारको एउटा घर म्हैसाल गाउँको अम्बिका नगरमा र अर्को राजधानी कर्नरमा छ ।
दूध लिन किन नआएको भन्दै स्थानीय बालिका सोमबार माणिक वनमोरेको घर पुग्दा परिवारका अन्य सदस्य पनि मृत अवस्थामा फेला परेपछि घटना बाहिर आएको हो । ढोका खुलेको देख्ने बित्तिकै उनी भित्र पसिन् । भित्र पस्दा शव देखेर उनी स्तब्ध भइन् । उनले गाउँका मानिसहरूलाई जानकारी गराइन्। गाउँले अर्का भाइ पोपट वनमोरको घर पुगे । तर त्यहाँ पनि परिवारका सदस्य मृत फेला परेका थिए । मानिसहरूले तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गरे।
घटनाबारे सांगलीका प्रहरी उपरीक्षक दीक्षित गेडामले सबै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए । अहिले शवलाई पोष्टमार्टमका लागि पठाइएको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै मृत्युको वास्तविक कारण खुल्नेछ । त्यसपछि मात्रै थप कारबाही हुन्छ ।